KDE Plasma 5.19 Na-abịa na Mmezi nke Ngwa Desktọpụ, Wijetị, na More | Site na Linux
Daysbọchị ole na ole gara aga, e gosipụtara ya na-eweputa ihe omuma ohuru nke gburugburu ebe obibi KDE Plasma 5.19 nke ndi oru oru KDE kọwara ya dika a "egbu maramara" mbipute na dịka ha si kwuo, otu ebumnuche bụ isi nke ụdị a bụ iji melite ịdị mfe nke iji ngwa ahụ.
Ihe ngosi nke KDE Plasma 5.19 gunyere avatars foto ohuru, paneelọzịa etolite etolite iji gosipụta wijetị na-akpaghị aka, a ọhụrụ anya n'ihi na media player apụl ndị dị mfe iji ma dị mfe na anya, yana nhazi na-agbanwe agbanwe na isi nkụnye eji isi mee ka apụl na ọkwa systray mara mma.
KDE Plasma 5.19 Igodo Ọhụrụ
Otu n’ime mgbanwe ndị a ma ama bụ akwụkwọ ahụaja ọhụrụ «Flow» nke na-eweta mmetụ nke ìhè na agba na desktọọpụ.
Emebeburu ya maka KDE Plasma 5.16 ma enwere ike ibudata onyonyo a na mkpebi 5K ozugbo site na KDE Phabricator.
Banyere mgbanwe adịghị “anya” anyị nwere ike ịchọta na ogwe osisi spacer, mmewere nke na-enyere aka idozi ihe ndị mejupụtara na panel ahụ na nke ahụ ugbu a nwere ike na-akpaghị aka na etiti wijetị.
Plasma 5.19 na-etinyekwa nhazi na ebe enwere isi maka apụl na systray, yana ọkwa.
Enwekwara ụfọdụ Plasma Breezen, na-ekwe ka Ngwa GTK 3 tinye ozugbo na palette agba ọhụrụs na ngwa GTK 2 iji agba ziri ezi, yana ịme ka ederede dị mfe ọgụgụ site na ịbawanye akara ngosi ndabara site na 9 ruo 10.
Mgbanwe ndị dị na ọkwa a gụnyekwara mmelite nke apụl Media Player na systray ahụ, na-enye gị ikike ịchịkwa ọhụhụ nke njikwa olu.
Na KDE Plasma 5.19, nhazi usoro ka mma. Ugbu a tinye nhọrọ ntinye ederede ohuru enwere ike ịhazi ya maka ndekọ aha dị iche iche.
Ọzọkwa, ntọala ntọala na-enye ohere setịpụrụ òké na trackpad scrolling ọsọ na Wayland, maka ndị na-eji ya, ma na-enyekwu gị ikike ịchịkwa ihe na-eme ikere ọsọ ọsọ nke nsonaazụ desktọọpụ.
Iji meziwanye ọ bụghị naanị arụmọrụ, kamakwa ọdịdị na njiri nke Plasma, ndị otu nyochara peeji nhazi nke ngwa ndabara, akaụntụ ịntanetị, ụzọ mkpirisi ụwa, iwu ndị nchịkwa ka mma. KWin ngosipụta na ọrụ ndabere.
Kwin na KDE Plasma 5.19, nke ugbu a gụnyere igbutu n'okpuru elu, nwere ike belata nchapu n'ọtụtụ ngwa, na-eme ka ike gwụ ha n'anya. N'otu aka ahụ, a gbanwere akara ngosi dị na mmanya aha ya na agba ya ka ọ daba na palette ahụ, nke mere ka ọ dịrị ha mfe ịhụ.
Ọzọkwa, E megharịrị ngwa Center Center na ọdịdị na ojiji nke na-agbanwe na nhazi nke usoro. Informationlọ Ọrụ Ozi ahụ nwere atụmatụ na-enye ndị ọrụ ohere ilele ozi gbasara ihe osise. E kwesịkwara ịkpọtụrụ ya na KInfoCenter na-akwado nhazi usoro ugbu a.
Choputa nwere ihe ohuru nke n’eme ka iwepu ebe nchekwa Flatpak di nfe. Discover na-egosiputa ụdị nke ngwa ahụ, nke bara uru, dịka ọmụmaatụ, mgbe enwere ọtụtụ nsụgharị nke ngwa ị na-achọ.
Dabere na akụrụngwa, ị nwere ike ịhọrọ nsụgharị nke nwere atụmatụ ịchọrọ; ma ọ bụ ihe ochie mbipute, ma ihe ike; ma ọ bụ nke kachasị arụ ọrụ maka nhazi gị.
Ihe ndi ozo di na KDE Plasma 5.19 gunyere:
Ngagharị ihuenyo na-akpaghị aka na Wayland maka mbadamba ma ọ bụ ngwaọrụ 2-in-1
Nkwado maka igosipụta ọnụ ọgụgụ maka sistemụ nwere ihe karịrị 12 CPUs na KSysGuard na nkwado maka Wayland maka Krunner.
E megharịkwala systray nke wijetị elekere elekere dijitalụ ma ọ dị mma ugbu a karịa mgbe etinyere na nsọtụ panel na bọtịnụ 'Hazie' maka wijetị ederede ugbu a na ndabara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » KDE Plasma 5.19 rutere na mmelite maka ihe ndị na-arụ ọrụ na Desktọpụ, Wijetị na More
Site na ntinye ohuru na nkesa nke Qt site na Qt Company, KDE no more.
Agughikwa m ihe banyere okwu a n’uzo obula.
Android 11 beta dị ugbu a ma enwere ike ịnwale ya ugbu a